Maitiro ekugadzira maforodha muiyo iOS photos application | IPhone nhau
Maitiro ekugadzira maforodha muiyo iOS mapikicha app
Kana iwe uchifarira kutora mifananidzo, zvine musoro kuti iwe unoda ita kuti mapikicha ako arongedzwe zvakanaka. MuIOS uye OS X tine dhizaini yebhuku inowanikwa, inoenderana nekuparadzanisa mafoto emhuri, shamwari, mapato uye mamwe marudzi ezviitiko. Asi ko kana isu tichida kupatsanura, semuenzaniso, mafoto emapato akasiyana atakamboenda? Zvakanaka, pane hunyengeri kuti uwane.
Tichazviita nekugadzira maforodha mukati maalbum. MuIOS tinokwanisa kugadzira maarubhamu akawanda atinoda, asi tinokwanisa zvakare kugadzira maforodha anotibvumidza kupatsanura mamiriro akasiyana atakaisa mumaarubhamu edu. Sezvauchaona, zviri nyore kwazvo.
Handei kune application Mifananidzo
Takatamba pa Albums
Tinobata uye tinobatirira chiratidzo "+"
Tichaona kuti sarudzo yekugadzira dambarefu kana dhairekitori inoonekwa. Tinosarudza "Dhairekodhi idzva"
Isu tinosuma zita yefaira iyo yatichagadzira
Takatamba pa Chengetedza
Kugadzira dhairekodhi mukati mefaira kana dambarefu, tinopinda iyo dhairekodhi kana albha uye tinobata paHedha
Tinodzokorora kubva padanho rechitatu
Sezvauri kuona, zviri nyore. Iwe unongoda kuziva nzira uye ikozvino unoiziva. Muchirongwa ichi ndakatsanangura nhanho kubva pakutanga, kugadzira dhairekitori nyowani kana paine mumwe munhu aisaziva kuzviita. Kana iwe uchitova nemafaira akagadzirwa, iwe uchafanirwa chete kuita nhanho 7 uye 8. Sezvinoratidzwa mudanho 8, ipapo uchafanirwa kuenda ku3 uye kupedzisa mune nhanho 6.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekugadzira maforodha muiyo iOS mapikicha app
Manheru akanaka, hunyengeri uhu ndanga ndisingazive, asi ini handinzwisise musiyano uripo pakati pealbum nefaira.
Manheru akanaka, Joam. Kubva pane zvandakaedza, maalbum anogona kuiswa mumafolda. Zvakafanana nekugadzira mafolda uye maforodha.
Ini ndakambozviedza asi ini handioni musiyano uripo pakati pekugadzira dhairekodhi / subfolder kana album / subalbum. Kuchave nemusiyano wemuviri here? Ndiri kureva kana iwe uchitsvaga mafoto pane chako chishandiso kubva pakombuta kuburikidza nemaforodha Handizivi ... hahaha
Izvo zvinokwanisika kufambisa yakatogadzirwa maalbham kufaira nyowani. Sarudzo chete yandinogona kuwana mufaira nyowani kugadzira maalbham matsva.
Kana zviri zvakataurwa naJoan, mashandisiro ainoita isangano raanopa mukushandisa kwemifananidzo. Semuenzaniso, dhairekitori iwe yaunosheedza marwendo 2015, iwe unotora maalbum akasiyana ayo achave aine mafoto enzvimbo imwe neimwe yawakashanyira.
Zvakanaka, ndatenda Aritz. Ndakaiyedza nezuro husiku uye unofanirwa kunge uri pachokwadi, zvirinani kuti ndakauya pamhedziso imwechete xD
Zvakanaka, hazvindipe mukana wekugadzira dura nyowani, ini ndinongowana dambarefu nyowani
Pindura kuna calr
Pedro Pardo Kukadzi akadaro
Chinhu chekugadzira maforodha ndinacho zvakajeka, Pedro zvandisinganzwisise ndosaka, kwese kwadzinochengeterwa, zvisingakwanise kudzimwa kubva pane reel; sezvo ichivabvisa kubva kumafolda uye nekuda kweichi chikonzero iwe unofanirwa kuchengeta reel nezviuru zvemifananidzo mune yangu uye ini handizive kuti ndoibvisa sei pasina kukanganisa akachengetedzwa.
Pindura Pedro Pardo Kukadzi
Mangwanani. Ndine 3rd chizvarwa iPad, yakura kwazvo ndinoziva. Ndine reel album uye ndine mamwe maalbubbu andakagadzira kwenguva yakareba aine mafoto akasiyana neaya ari pane reel uye handirangariri kuti ndakazviita sei, chokwadi ndechekuti ini ndakatoendesa mapikicha kubva kune reel kuenda ku Mac.
RUVA RWEMAZUVA akadaro
MHORO . NDINOTEVERA MATANHO OSE KUGADZIRA MAFOLDA UYE KUTI URONGESE YANGU MIFANANIDZO
HANDI KUZIVA KUTI NDINOPFUMISA MIFANANIDZO KUVANHU VAKADZIDZA
UNGA NDIBATSIRA HERE?. WAITA HAKO
Pindura kuna MARGARITA
Tichava nedzimwe nhau muIOS 9
YouTube haisisiri yakazara skrini paPad